Home Wararka Marekanka oo walaac ka muujiyay halista kororka awoodda Al Shabaab
Marekanka oo walaac ka muujiyay halista kororka awoodda Al Shabaab
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM, Genaral Stephen Townsend oo wareysi dheer siiyey VOA ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan howl-gallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Taliyaha AFRICOM ayaa shaaca ka qaaday in bilihii u dmabeeyey ay sii korortay halisTa Al-Shabaab, kadib markii laga gaabiyey howl-galladii socday.
“Halista Al-Shabaab waxa ay korortay 8-dii illaa 12-kii bil, maamulkii hore waxa uu nagu sameeyay in aan Soomaaliya ka qaadno ciidankeena, weli waxaa inoo taallo shaqadii aan heynay, sababta keentay halistaas waa jiritaan la’aanta culeys la saarayay Al-Shabaab,” ayuu yiri Stephen Townsend.
Sidoo kale wuxuu sababta ka dambeysa kororka ku yimid halista Al-Shabaab ku sheegay saddex arrimood oo kala ah:- Gaabis weyn oo ku yimid howl-galka AMISOM, saameynta cudurka Covid-19 & khilaafka ka dhashay muddo xileedka dhammaaday ee Madaxweynaha.
“Dhaq-dhaqaaq la’aanta AMISOM, Saameynta Covid-19 iyo khilaafka ka dhashay muddo xileedka dhammaaday ee Madaxweynaha Soomaaliya waxa aan filayaa in ay tahay halista kordhisay weerarada Al-Shabaab,” ayuu markale ku yiri wareysigan Taliyaha AFRICOM.
Genaral Stephen Townsend ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qaraxyadii u dambeeyey ee ay geysatay Al-Shabaab, isaga intaasi ku daraya inay sii kordhi karaan weerarada kooxda.
“Waxa aan dareen ka qabnaa in ay kordhi karaan weerarada maadaama ay geysteen qaraxyo” ayuu hadalkiisa sii raaciya.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo todobaadyadii lasoo dhaafay weeraro is-miidaamin ah oo dhaliyey khasaarooyin kala duwan ay ka dhaceen gudaha caasimadda, kuwaas oo kusoo aaday, xilli adag oo ay Soomaaliya ku jirto xaalad kala guur ah iyo doorashooyin.
Si kastaba, Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka ka qeyb-qaata dagaalka adag ee lagula jiro Al-Shabaab, wuxuuna sidoo kale tababar siiyaa ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Previous articleXildhibaankii koowaad ee golaha Shacabka ee deeganada oo Garowe lagu doortay
Next articleIkraan Tahliil Hooyadeed oo digniin adag u dirtay Fahad tegistiisa Beledwyne
Tartanka Koobka Kubadda Cagta Gobolada Puntland oo maanta dib u furmaya